प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउनु खतरनाक - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ माघ २०७३, बिहीबार १०:१० |
एजेन्सी । घरबाट बाहिर निस्कदां पानी साथमा लिने गर्नुभएको छ भने कस्तो बोतल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? त्यसमाथि प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने अझ बढी सर्तक हुनुहोस् । किनभने गर्भावस्थामा प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउने बानी खतरनाक हुन सक्ने हालै गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनमा बताइए अनुसार गर्भावस्थामा प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउँदा हर्मोनमा परिवर्तन आउन सक्छ ।
प्लाष्टिकको बोतलमा पाइने Bisphenol -BPA) नामक रसायनले भोकलाई नियन्त्रण गर्ने हर्मोनलाई पनि निष्क्रिय बनाइदिन्छ । यसको कारण गर्भवती महिलाको भोक लाग्ने प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने द इन्डोक्रइन सोसाइटीले सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त रसायनले गर्भवती महिला तथा गर्भमा हुर्किरहेको शिशुको मानसिक स्वास्थ्यको लागि समेत खतरानक हुने पनि बताइएको छ ।
क्यानडाको युनिवर्सिटि अफ ओटावाका सोधकर्ता डा. अलफोंसो BPA ले प्लाष्टिकको बोतलमा पाइने द्यएब् ले शरीरको उर्जा तथा हर्मोनको सन्तुलन बिगार्ने बताएका छन् । त्यसको फलस्वरुप शरीरमा विभिन्न किसिमको अनावश्यक परिवर्तन हुने बताइएको छ । बच्चाहरुमा मोटोपनाको समस्या समेत देखिन सक्ने पनि उक्त अध्ययनमा बताईएको छ ।
यसअघि कलेज अफ लण्डन युनिभर्सिटीको एक अध्ययन पछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पानीले भरिएको प्लाष्टिकको बोतल केही घण्टा घाममा राख्दा विषालु हुने पनि बताइएको थियो । त्यसले पेटको डरलाग्दो रोग निम्त्याउने उल्लेख गरिएको थियो । प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउनु क्यान्सर रोगको कारण बन्न सक्ने पनि बताइन्छ ।
Previousआइजीपी नियुक्तिको विषयमा देउवा र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद,क्याबिनेट वैठक स्थगित
Nextफेसबुकमा सन्देश छोडेर मोडलद्धारा आत्महत्या
१ बैशाख २०७३, बुधबार ०२:३८
१४ वर्षमै विवाह, २० वर्षमै सम्बन्धविच्छेद
१२ बैशाख २०७५, बुधबार ०२:४०
यस वर्षको एसएलसी परीक्षा बिहीबारदेखि सुरु
५ चैत्र २०७१, बिहीबार ०२:१२